बेरोजगार श्रीमतीले मेरो कमाई भन्दै जब श्रीमानलाई १० करोड रुपैयाँ दिइन, काम थाहा पाउँदा चकित ! – AB Sansar
September 25, 2020 adminLeaveaComment on बेरोजगार श्रीमतीले मेरो कमाई भन्दै जब श्रीमानलाई १० करोड रुपैयाँ दिइन, काम थाहा पाउँदा चकित !
सुरक्षित भएको महसुसपनि गरे । यो त्यस्तो होइन जस्तो द्रुत गतिमा घोटाला गरेर धनी हुन्छन् जहाँ तपाईंलाई पैसा कमाउनका लागि सामान बेच्नुपर्दछ भन्ने त्यहाँ छिरेपछि थाहा पाए । यदि मैले ती चीजहरू बेच्नु पर्छ भन्ने आँट नभएपनि साइन अप गरिदिए ।
यसरी नै उनीहरुको ३ वर्ष बित्यो । अली काममा जान्छन् जबकि महनूर घरमा ओलम्पट्रेड प्रणालीमा काम गर्थिन् । उनको गोप्य खातामा पैसा जम्मा भइरहेको हुन्छ । उनी भन्छिन्, ‘मेरो श्रीमान्‌बाट त्यस्तो गोप्य कुरा राख्न मलाई एकदम गाह्रो भयो । मलाई लाग्यो कि मैले उसलाई धोका दिएँ, तर मलाई डर छ कि म उसलाई अझ कहिलेसम्म लुकाउँ । तर यो बारेमा अहिले फर्केर हेर्दा, म मूर्ख थिएँ ।’ भन्ने लाग्छ